koswan: တန်ဖိုးရှိသော ထို (၁၀) ရက်
တန်ဖိုးရှိသော ထို (၁၀) ရက်
ဘာရေးလို့ ရေးရမယ်မသိ ၊ ဝမ်းစာ နည်းတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မကြီးက တက်လိုက်တာ ရေးစရာ ပို့လေးတစ်ခု ရသွားတာပေါ့။့ နာမည်ကြီး မင်းသမီး မကြီး (မဝါ)ကိုယ်တိုင်က တက်တာဆိုတော့ ဂုဏ်တောင်ရှိသေး ...နှော်။
တက်လိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကလည်း ကြည့်ဦး ... မသေခင် ၁၀ ရက် အလိုမှာ ဘာတွေလုပ်မလဲတဲ့။ မေးလည်း မေးတတ်ပလေ။ ဘယ်တော့သေမယ်ဆိုတာ မသိတာကို သေဖို့ ၁၀ရက်အလို ဆိုပြီး ကွက်တိကို မေးထားတယ်။ ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့ သဘောကတော့သေမှာကို ကိုယ်က ကြိုသိတဲ့ အနေနဲ့ ရေးရမှာ ... ဆိုတော့ကာ ...
ကျွန်တော်သာ... သေဖို့ ၁၀ရက်ပဲလိုတော့တယ်လို့ သိခဲ့ရမယ်ဆိုရင်...
ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုကနေပြီး ဖေဖေ၊မေမေ ရှိတဲ့ အိမ်လေးကို ရောက်အောင် ပြန်သွားမယ်။မိဘတွေအပေါ်မှာ ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံတစ်ခုခုနဲ့(မရည်ရွယ်ပဲ)ပြစ်မှား ဘူးခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ကန်တော့တောင်းပန်မယ်။ပြီးရင်ဖေဖေ၊မေမေတို့ အနားမှာနေပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုစုပေးမယ်။ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ကန်တော့အိပ်မယ်(ကျွန်တော့်နောက်ဆုံး အချိန်ဆိုတာ မသိစေရပဲ )။
ကျွန်တော့် ညီလေး၂ယောက်နဲ့ ညီမလေးတို့ လုပ်ချင်တာတွေအားလုံး လိုက်လုပ်ပေးမယ်။ ဆောင်းရာသီဖြစ်နေရင်တော့..ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ ညတိုင်းကစားနေကျကြက်တောင်ရိုက်မယ်။ တစ်ယောက်တည်း လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ သွားထိုင်ပြီး သောက်နေကျ လ္ဘက်ရည်လေးတစ်ခွက်ကို အချိန်ယူပြီး အေးအေးဆေးဆေးလေး မော့သောက်ရင်းနဲ့ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို အားရပါးရ ရှိုက်ဖွာပြစ်မယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအားလုံးနဲ့ အဝတ်အစားတွေ အားလုံးကို မရှိဆင်းရဲသားတွေ လိုက်ပေးမယ်။ အကြွေးတွေ အားလုံး လိုက်ဆပ်မယ်။(ဆပ်လို့ရမယ့်အရာတွေ)
နဖူးပြင်လေးတစ်စုံကို တစ်ဝကြီး နမ်းရှိုက်ပြီး ကျောခိုင်းသွားမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးဆီ လိုက်လည်မယ်။ငယ်ငယ်က ကျောင်းပုန်းနေကျ မူကြိုကျောင်းလေးထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Table Tenis ရိုက်မယ်။(လာဖမ်းမဲ့ ဆရာတွေ မရှိတော့ ရင်ခုန်စရာတော့ ကောင်းမယ် မထင်ဘူး)
သူတို့တွေနဲ့ သောင်ပြင်တစ်ခုပေါ်မှာ ဘောလုံးချိန်းကန်မယ်။( ခြေကုန်လက်ပန်း ကျတဲ့အထိ )။ ညမှာ ..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂစ်တာတီးနေကျ လမ်းဆုံတစ်ခုရဲ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ အပြင်းစားသီချင်းတွေ အော်ဆိုပြစ်မယ်။ နောက်ဆုံး ...ခင်ဝမ်းရဲ့" ကျွန်တော်သွားတော့မယ် " သီချင်းကို ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပက်လက်လန်အိပ်ပြီး ဆိုမယ်။( အဲဒီအချိန် ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လေးတွေ ရှိနေရင်တော့ အရမ်းကောင်းမယ်)
တရားစခန်းဝင်မယ်။ တရားခွေတွေ နာမယ်။ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားမယ်။
*တိုး.. တိတ် .. ငြင် .. သာ .. စွာ .. ပါ .. ပဲ*
အခုရေးပြီးမှ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ငါနေဖို့ ၁၀ရက်ပဲ လိုတော့တယ်လို့ သိလိုက်ရတော့ ငါ့အတွက် လုပ်စရာတွေက အများကြီးပါလား။ လုပ်ချင်တာတွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ လုပ်ခွင့်ရမယ့် အချိန်ဆိုတာလေးက တော်တော်လေးကို နည်းလွန်းနေတယ်လေ။ တစ်ခြား လုပ်စရာတွေ ဆိုတာကို ခဏဘေးမှာထားပြီး ကိုယ့်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အတူနေရဖို့၊ မိဘတွေကို ပြန်လည် ပြုစုဖို့ အတွက်တောင်မှ ငါ့အတွက် ၁၀ရက်လေးပဲ ရပါလား ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ။ ဒါတောင် မဝါက သဘောကောင်းပြီး ၁၀ရက် ကြိုသိခွင့်ပေးထားလို့။ တစ်ကယ်တမ်း အပြင်မှာတော့ ၁၀ရက် မပြောနဲ့ ၁ရက်ကလေးတောင်မှ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုတင်သိဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ တစ်ကယ်လည်း ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမယ်ဆိုတာ ကို မသိလိုက်ရပဲဗြုန်းစားကြီးသာ သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ( ၁ရက်လေးတောင်မှ ) မိဘတွေကို ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်မရတော့ပါလား ဆိုတဲ့ အသိက ...
အခု အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ကောင်းတာလေးတွေ လုပ်ပြီး၊ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆပ်သွားမှ တော်ကာကျမယ်။ အခု ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေဆိုတာတောင် ဘာမှ မမာမကျန်းမဖြစ်ပဲ ၊ လူကောင်းပကတိကနေ ထွက်ခွာသွားရမယ့် အနေအထားမျိုးပါ။ မကျန်းမမာဖြစ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ လဲနေရမယ်။ ပြီးတော့ မနက်ဖြန်မှာပဲ ကျွန်တော် ထွက်ခွာသွားရမယ်ဆိုရင်.....ကျွန်တော် ဘယ်လိုနေမလဲ??? ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘဝကူးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ တစ်ခုကလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။???
ဟောဒီက Tag ဗျို့
ညီလေး ဖတ်ဖို့ (၂)
ညီလေး ဖတ်ဖို့ ( ၁ )